Iyi iPhone yakaputirwa mumoto uchichaja | IPhone nhau
Zvinotaridza kuti maPhones ari kuwana husina kunaka hutano nguva pfupi yapfuura yekutiyeuchidza isu kuti kunyange tekinoroji yepamusoro inogona kukundikana, kubata pamoto uye zvichikonzera, pane zvirinani, kutyisa kwakanaka kumuridzi wayo. Kwete mwedzi kubva pandakapedzisira Isu tinokuzivisa iwe nezve yakafanana nyaya uye, kunyangwe hazvo isina kunyatsofanana, ichiri chokwadi chinoda kuziva.
Panguva ino mamiriro ezvinhu akaitika angangoita maminetsi makumi maviri David Grimsley, mugari weAtlanta, akaisa yake iPhone kuchaja. Mushure menguva iyoyo yako iPhone 6 Uyezve (kushamisika kusinganzwisisike, sezvo chishandiso chiri pamusoro chambotaurwa chaive zvakare ichocho modhi) yakatanga kupisa pamusoro pemubhedha wake, mushure meizvozvo aifanira kuibvisa nekukurumidza kubva panzvimbo. "Imba yose ingadai yakapisa," Grimsley anochema.
Ehe, Apple yatora mutoro wekupa imwe nyowani, asi chokwadi ndechekuti David haasi kunyatsofara, kubvira kufarira kwakaratidzwa nekambani pamusoro pezvakaitika zvinoita kunge kwaive kushoma. Zvichida iyi ndeimwe yemapoinzi ekuti avo vanobva kuCupertino vanofanirwa kuongorora kana vasingade kurasikirwa nemukurumbira wakanaka iwo wavanayo wepasi rose maererano nekubata nemutengi.
Nekudaro, kunyangwe asina kukuvadzwa uye aine iPhone nyowani naye, David Grimsley haana kunyatso gadzikana mumamiriro ake azvino mamiriro (izvo zvine musoro kufunga zviitiko zvezvino). Iye pachake akataura izvozvo anonzwa kutya nguva dzese paunodzosera zvakare mukati padhuze nezvinhu zvinotsva, sekuti "chinhu chimwe chete chinogona kuitika zvakare".
Zvisinei nekuti ivo vari vega makesi, zvakakosha kuyeuka kuti isu tinofanirwa kugara tichichaja yedu iPhone isina chifukidziro uye netambo dzepakutanga kana kusimbiswa naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvakare imwe iPhone inoputika mumirazvo ichichaja
Kutendeseka kutaura, aya mamiriro anogona kudzivirirwa, iyo iPhone inopisa kana iwe ukaisa iyo uye uchitamba nayo uye / kana kutarisa mavhidhiyo pairi, semutemo wega ndinofanira kuibhadharisa uye kuishandisa zvishoma sezvinobvira, ndinorara nayo yatobhadhariswa pa 90-100% uye mune saver mode, vangangoita vese vanoiisa mukati uye voirega ichitengesa husiku uye iko kukanganisa
Josué iyo haisi mhosho, iphoje ine masystem ekuchengetedza kuitira kuti pasaitike chinhu senge nhare mbozha, uye kune iyo ndiyo charger yayo, iyo inoibhadharisa zvakanaka, ndosaka kune vakawanda rednecks vanotora chero charger yechiChinese vachifunga kuti zvakafanana uye hazvisi, vanhu vazhinji vanotenda kuti chinhu chekutambisa uye kuti zvese zviri nyore, zvese zvinoitwa nechimwe chinhu chikanganiso chete chichava icho, chiitiko chisingawanzoitika ndechekuti chakaremara asi ndinokahadzika kuti chichava buda jn Saka fekitori kuremara nemaidhiraivha aripo
Zvinosekesa kuti ese kesi ari epingi, ese mapenzi ayo aanopa. Kusununguka uye kusanzwisisa maitiro ekuchaja iyo iPhone yaizotenga iyo iPhone yeiyo vara
BBQ 6s ajajajajajajaja
Zvakanaka, ndinofunga dambudziko ndere uyu David Grimsley sezvo ASI KUFANIRA KUTI ANOBATSIRA NZIRA PAMUSORO PEMUBEDZI WAKE. Sezvo ini ndichirangarira mumazano emugadziri ivo vanoti inofanirwa kudzoreredzwa munzvimbo inotonhorera uye ine mweya yakadai setafura kana pasi ... Apple haina mhosva ...
Ini ndinogara ndichichaja iyo iPhone masikati, ndisati ndaenda kunorara inofanirwa kunge ichinge yazara zvizere, pfupa zvakanyanya kana zvishoma pa80-100% yebhatiri uye ndinoibvisa ... ichichaja husiku (asi nejaja iPhone 6 iyo inondibhadharisa zvakapetwa zvishoma zvishoma)….
Kune vanhu vasinganzwisise kuti chajaja yeChinese haina kufanana nechaja yekutanga ... zvakakodzera kushandisa mari yakawanda pane chimwe chinhu chakachengeteka pane pane chimwe chinhu chisina kuchengetedzeka ... mushure mezvose, uri kuhwina !!!
Chimwe chinhu ndeye kuchengetedzeka sisitimu iyo iyo iPhone pavanosvika 100% kubhadharisa, inogona kunge yakaremara asi ini ndinokahadzika kuti yaive nekuda kweizvozvo!
Chimwe chinhu ... kana chikaputika, zviri nekuda kwezvikonzero izvi
1-bhatiri re iPhone 6 Plus haisi yepakutanga asi yechiChinese (pane vanhu vanozviita nekuti vane bhatiri rakawanda)
2-iyo charger isiriyo ..
3-iyo iPhone chengetedzo system yakundikana (?)
Kwaziso uye gore rakanaka!
Ivo vakarurama, kunyangwe yakachengeteka sei chero kambani inoisa zvishandiso, kana mushandisi akasateedzera iyo yekutanga mirairo yekushandisa kwakakodzera, chichava kukoka kune tsaona. Muno muMexico kwave nedzimba dzakapiswa nechaja mumamiriro asina kunaka kana nekuchaja nharembozha nechaja isingadhuri uye nemaitiro asina kuchengetedzeka Dambudziko nderekuti vanhu vazhinji havaverenge mirau uye vanofungidzira kuti vanoziva kushandisa zvishandiso.
Andre paachajisa ipad nejaja ye iphone ine inoburitsa mazana mashanu emamiriyoni apo ipad iri 500 watt, ziva kuti haingobhadharise zvishoma asi ichapisa zvakanyanya, sezvo urikumanikidza kuti ive nechairi zvakapetwa zvakapetwa kune izvo zvakagadzirirwa. Kana iyojaja yeApple yakagadzirirwa nguva yekuchaja kwemaawa maviri uye iwe ukaisa iyo iPad ine 1mAmp bhatiri kana iyo iPhone iri kutenderedza 2mAmp, urikuiita kuti ishande pamutoro uzere kwemaawa akawanda kupfuura iyo yainge yakagadzirirwa.
BigBoss repo inogadziriswazve pakutanga kwegore